Bukaan coronavirus qabay oo garaacis nafta kaga qaaday bukaan kale oo tukanayay - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada Bukaan coronavirus qabay oo garaacis nafta kaga qaaday bukaan kale oo tukanayay
Ninka waayeelka ahaa ayaa geeriyooday maalintii xigtay.
Labada nin, oo ay booliisku sheegeen inaysan is aqoon, ayaa laga daweynayay coronavirus iyagoo ku sugnaa qol ay labo qof wadaagaan oo ku yaalla isbitaalka Antelope Valley ee magaalada Lancaster oo ku taalla California.
“Ninka laga shakisan yahay ayaa ka xumaaday markii uu ninka waayeelka ahaa bilaabay inuu duceysto. Wuxuu kaddib ku garaacay taangi oxygen ah,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu soo saaray booliiska Los Angels.
“Ninkan, oo 37 jir ah laguna magacaabo Jesse Martinez, ayaa la xiray waxaana lagu xukumay dil, dembi nacayb ah iyo tacaddi uu qof da` ah kula kacay,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Isbitaallada California ayaa la daalaa dhacaya wax ka qabashada xanuunka kaddib markii keliya muddo lix toddobaad ah gobolka laga soo sheegay hal milyan oo kiisas cusub ah. In ka badan labo milyan oo kiis ayaa haatan la xaqiijiyay in laga helay California tan iyo intii uu ka dillaacay xanuunka safmarka ah.
Isniintii xoghayaha caafimaadka California Dr Mark Ghaly ayaa sheegay in wixii loo gaaro dhammaadka bishan ama horraanta January laga yaabo in qolal laga waayo isbitaalka xitaa xarumaha ku meel gaarka ah ee isbitaalka lagu soo kordhiyay ee bukaannada lagu daweeyo.
Barasaabka California Gavin Newsom ayaa soo saaray amar guri joogis ah iyadoo ganacsiyo badan oo aan muhiim ahaynna la xiray.
Shaly waxaa Mareykanka laga diwaan geliyay 228,131 oo kiisas cuusub oo Covid-19 ah iyo 3,359 oo dhimasho ah.